सावधान ! अब कहाँ कहाँ आउँछ बाढीपहिरो ? « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 12 July, 2020 12:24 pm
काठमाडौं । केहीदिन यताको अविरल वर्षाले मुलुकको विभिन ठाउँमा बाढीपहिरो गइरहेको छ । मनसुन शुरु भएयता २९ दिनमा मुलुकको विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले ८८ जनाले जीवन गुमाइसकेका छन् । बाढीपहिरोमा परेका ३२ जना अझै बेपत्ता छन् ।
बाढीपहिरोले पहाड तथा तराईका १९ जिल्ला प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा अझै २४ भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । देशको केही ठाउँमा मेघगर्जन रचट्याङसहित वर्षा हुने विभागको अनुमान छ ।
विभागले वर्षाको कारण नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, बाढी आउने तथा पहिरो जान सक्ने भन्दै सतर्क रहन समेत आग्रह गरेको छ ।
बाढीपहिरोले सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने र ढल तथा पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान हुन सक्ने विभागको मौसम प्रक्षेपण छ ।
प्रदेश १ तथा २ र बागमतीको केही ठाउँमा भारी वर्षा भइ बाढीपहिरो जान सक्ने उल्लेख गरेको छ । गण्डकी र प्रदेश ५ का केही स्थानमा फेरि भारी वर्षा सम्भावना छ । ती ठाउँमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भू–क्षय हुने, पहिरो जाने विभागको अनुमान छ ।
कोरोनाले क्रिकेट अष्ट्रेलिया स्थगित
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को महामारीका कारण क्रिकेट अष्ट्रेलिया (सिए) ले वेस्टइण्डिजविरुद्धको सिरिज